musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Luxury Cruising: Silversea inopemberera jubheri resirivha
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • Monaco Kupwanya Nhau • nhau • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Silversea Cruises inoshanda makore makumi maviri nemashanu seyeumbozha rwendo rwekufamba. Silversea yakavhura runako rwechokwadi rwepasi kune vangangoita hafu yemiriyoni vashanyi pane angangoita mazana mana emakiromita. Ngarava dzeSilversea dzakapedza huwandu hwakawandisa hwemazuva anopfuura 25 echikepe, nepo vashanyi vevashanyi vakafamba zvakadzama pane yakasanganiswa yakazara inopfuura 4,100 mamirioni mazuva echikepe.
Kuunza hunyanzvi kumahombekombe eruzivo nepfungwa yepiyona chaiyo, Silversea ndiyo yekutanga nyika-inosanganisira Ultra-yakasarudzika cruise mutsetse payakatanga muna 1994. Chinangwa-chakavakwa Sirivheri Cloud - ngarava yekutanga yemutsetse, iyo yaive yakasarudzika zvakanyanya senge zvese masutu aisanganisira bhandi remunhu - akabhabhatidzwa muMonaco musi waMay 30, 1994, pamberi peHSH Prince Albert II weMonaco. Kubva ipapo, vashanyi vaSilversea vaenda kunzvimbo dzinoshamisa kwazvo dzenyika mukunyaradza kusingaenzaniswi, vachifarira sevhisi yakasarudzika uye nehukama hwepedyo vari muchikepe. Mazhinji maficha eruzivo akachinja mukati memakore makumi maviri nemashanu apfuura, asi aya musimboti misimboti yasara uye nhasi uno ita Silversea cruise yakasarudzika.
Sil Siliaa payakavambwa nemhuri yeLefebvre makore makumi maviri nemashanu apfuura, chiratidzo chaive chekutangisa rwendo rwekufamba rwendo rwakange rwuchisvika pasirese, mupfungwa yekuti vashanyi vanobva pasirese vaizoona nzvimbo dzepasi uye dzinoyevedza kwazvo munyaradzo yepamusoro, ne nzvimbo yakakura yekushandurwa kwakasiyana siyana. Ichi chiratidzo chave kubudirira kubudirira, seSilversea nhasi inovhura inonyudza zviitiko zvekufamba kune vashanyi munzvimbo dzinopfuura mazana mapfumbamwe, kubva padanda kuenda padanda - kupfuura chero imwe nzira yekufambisa.
Unyanzvi hwenzvimbo hwakagara hwakasiyanisa Silversea Cruises, asi kwaive kuvhurwa kweSilversea Expeditions muna2008 uko kwakasundira miganho yekutsvaga kupfuura indasitiri yeumbozha yakanga yamboona: nzendo dzakakosha dzinosanganisira Antarctica muna 2008; West Coast yeAfrica uye Russian Arctic muna 2012; Micronesia, Melanesia nePolynesia muna 2013; iyo Galapagos Islands, Russian Far East, iyo Kimberley Coast, uye yekutanga Northwest Passage kuyambuka muna 2014; uye Bangladesh muna 2017. Muna 2019, vaenzi vaSilversea vachayambuka Northeast Passage kekutanga, nepo ngarava ichatanga kuita Expedition World Cruise yepasi rose muna 2021. Hutungamiri hweSilversea hwekuenda kumatunhu anoyevedza, akadai seMediterranean ne Caribbean, zvakare inoramba yakasimba sekusingaperi uye inofungidzirwa pazviitiko zvakadzika zvekufamba.
Kubva mungarava imwe chete muna 1994, vashanyi vaSilversea nhasi vanofarira ngarava dzezvipfumbamwe zvepamusoro-soro, ngarava dzepedyo — uye zvimwe ngarava shanu zviri kurongwa. Kutevera kuvhurwa kweSilver Cloud muna1994, Silver Wind yakapetwa kaviri kugona kweiyo cruise muna 1995. Silver Shadow neSilver Whisper zvakatangwa muna 2000 na 2001, zvichiteerana. Sirivheri Explorer, ngarava yekutanga yechando-yechikepe, yakavhura zviitiko zvekushanya kutenderera pasirese kune vashanyi kubva muna 2008. Silver Spirit yakabatana nezvikepe muna2009, ichiteverwa neSilver Galapagos muna 2013 uye Sirivheri Yakawanikwa muna 2014. Mufambo wengarava, Silver Muse , yakavhurwa muna2017 uye yakafemera chikepe chakakura 'Musification'-iko kugadzirisa patsva kwezvikepe zveSilversea, izvo zviri kuenderera mberi. Muna 2020, Sirivheri Akatangira - ngarava inoyevedza kupfuura dzose dzakambofamba neGalapagos - uye Silver Moon ichabatana nezvikepe izvi, zvichiteverwa naSilver Dawn muna 2021 uye yekutanga kune mbiri Evolution Class ngarava muna 2022.
Kudya kwakanaka kubva kutenderera pasirese, zvinwiwa zvinodakadza mungarava, uye mudiri weimwe neimwe suite ndezvimwe zvezvinhu zvakanaka zvakafarirwa nevaenzi veSilversea kubva pakatangwa rwendo rwekufamba rwendo muna 1994. Kubva Royal Caribbean Cruises Ltd.'s kuwanikwa kweSilversea muna 2018, mifananidzo iyi yeumbozha - nevamwe vazhinji - yakawedzeredzwa neProjekiti Invictus, chirongwa chenguva refu chekukura uye kusimudzira zvikepe zveSilversea zvezvikepe: vashanyi vanonakidzwa nemashiripiti emhando yepamusoro, anotonhorera mumasuti avo pavanosvika uye mukati ngarava; complimentary inogona kuenderera caviar, inowanikwa maawa makumi maviri nemana pazuva; chipo chakapfumiswa che canapes, chikafu chegungwa, ma berries, uye yakanaka steak kucheka; uye yakakwidziridzwa waini runyorwa, iyo yatove inoumbwa neakakura ekupa mupiro pagungwa.
Silversea Cruises inodada nekukurudzira mhuri-senge mamiriro uye inotora mukana weye 25th gore rekucherechedza avo vakavimbika-vazhinji vashanyi nevashandi - mumwe nemumwe wavo akaita kuti zvikwanise kusvika padanho rakakosha iri. Vakatendeseka kwazvo vevashanyi vaSilversea mumwe nemumwe akaunganidza anopfuura mazuva mazana maviri nemazana matatu eVenetian Sail mazuva atove, ayo anokwana kusvika makore manomwe anopedzwa vari mungarava dzaSilversea. Pakutangwa kwayo, Silversea yakatanga nevashandi makumi maviri nevashanu vepasi-muFort Lauderdale; pakupera kwegore ra2,300, paive nevashandi 25- vaisanganisira vashandi vepabhodhi nevashandi vepasi-pasi mumahofisi pasirese.
"Ndinonzwa kudada kwazvo kana ndikafunga zvatakaita mumakore makumi maviri nemashanu," anodaro Manfredi Lefebvre, Sachigaro Mukuru weSilversea. “Kubva mungarava imwechete muna 25 kuenda kune zvikepe zvipfumbamwe zvine zvishanu zvichizouya, tichakurumidza kuona chiratidzo chakatarwa nababa vangu pavakaunza hunyanzvi muindasitiri yedu uye vatangisa rwendo rwedu rwekufamba. Ndinotenda vatenzi vedu vakavimbika, vanachipangamazano vedu vekushanya, uye nevashandi nevashandi vedu - vakaita kuti kubudirire uku kukuru. Isu tinoramba tichishanda kusundira miganho yekufamba; iva nechokwadi chekuti aya angori mavambo. ”
“Ndakabatana neSilversea Cruises muna 1994 - makore anoda kusvika makumi maviri nemashanu apfuura - apo kambani iyi yaive nemwedzi mitanhatu yekuberekwa uye yaive nechikepe chimwe chete. Ndave pano kubvira ipapo, ”anodaro Fernando Barroso de Oliveira, Mumiriri weSachigaro weSilversea kuVenetian Society. “Ndinonzwa ndiri pamba. Uye vaenzi vanonzwa zvakafanana - isu tiri mhuri. Tinoda kuti vaenzi vedu vanzwe sekunge ivo chikamu chechimwe chinhu chakakosha. Ngarava dzedu imba yavo kure nemusha, sezvo isu takakwanisa kugadzira yakanaka mamiriro muchikepe. Chikamu chakakosha chebasa rangu ndechekushamwaridzana nevashanyi vedu uye ini ndaumba hukama hwakasimba. Muchokwadi, vashanyi vazhinji vauya kuzogara nemhuri yangu neni muPortugal mukati memakore makumi maviri nemashanu apfuura, uye ndakagara navo. Zvino, kana vashanyi vauya mungarava, vanobvunza kana dzimwe nhengo dzechikwata - kubva kune vanogadzira bhawa kusvika kune vanogadzira, vanonwa, uye vatariri vemadziva - variwo mungarava, sezvo vanhu vedu vakakosha senzvimbo dzatinoshanyira. Kwandiri, zviri nyore kunzwisisa kuti sei Silversea yakakosha kuvanhu vazhinji: hushamwari, umbozha, uye sevhisi. ”
“Ndakaziva Kaputeni kuSilversea achibva andibata. Iye zvino ndava nemakore makumi maviri ndiri pakambani iyi, ”anodaro Captain Alessandro Zanello, uyo akabatana neSilversea Cruises muna 1999." Panguva iyoyo, Silversea yakanga iine zvikepe zviviri chete, asi manzwiro aive muchikepe akange akasiyana nedzimwe nzira dzevashanyi. " . Paive nemanzwiro akasimba emhuri - pakati pevose vashanyi nevashandi; nekuti ngarava dzaive dzepedyo kwazvo, paive nekudyidzana kwepedyo. Izvi zvinoramba zvisina kuchinja nhasi. Ini ndakasangana nemukadzi wangu paSilver Spirit muna2009, saka ndinobatanidza kukosha kukuru kwekunzwa kukambani. Zvakakosha chaizvo. Imwe yenguva dzangu dzekuzvitutumadza paSilversea ndipo pandakave Kapteni weSilver Muse yekugadzwa kwake muna2017 - handimbofi ndakakanganwa kubudirira uku. ”